Warshadaha Shiinaha ee Glass laablaabida albaabka Kinzon35 iyo alaab-qeybiyeyaasha | Kinzon
Glass laablaabka albaabka Kinzon35
Glass laablaabka galaaska-Kinzon35 wuxuu leeyahay astaan ​​magdhaw oo hagaajin kara farqiga u dhexeeya nidaamka iyo saqafka. Markii la dhaqaajinaayo gacanta ku haysa garabka albaabka ee uu dhigay nidaamka albaabka, Glass isku laabida muraayadda-Kinzon35 wuxuu ku shaqeeyaa farsamooyin isku riixaya dhammaan dariiqa oo dhan, isku qasbaya. Albaabka isku laabma dhalada -Kinzon35 wuxuu ku dhejin karaa 9 muraayadood oo quraarad ah hal dhinac isla markaana isticmaali kara 5 + 6A + 5 galaas laba qabow leh. Glass iskula laablaabida muraayadda-Kinzon35 wuxuu leeyahay qaybo gaar ah oo qaabeyn ah si looga fogaado in muraayadaha muraayadaha ay hoos u dhacaan markii ay furayaan.
Glass laablaabida dhalada-Kinzon35
Furitaanka galaaska albaabka-Kinzon35 wuxuu leeyahay astaan ​​magdhow oo hagaajin kara farqiga u dhexeeya nidaamka iyo saqafka. Markii la dhaqaajinaayo gacanta ku haysa garabka albaabka ee uu dhigay nidaamka albaabku, Frame isku laabista galaaska albaabka-Kinzon35 wuxuu ku shaqeeyaa farsamooyin isku riixaya dhammaan dariiqa, kuna cadaadinaya. Gla glame glayon35 terrace glazing wuxuu ku dhejin karaa 9 muraayadaha dhalada ah hal dhinac wuxuuna isticmaali karaa 5 + 6A + 5 galaas laba qabow leh. Gla glameedka loo yaqaan Kinzon35 terrace glazing wuxuu leeyahay qeybo qaas ah oo naqshadeysan si looga fogaado in muraayadaha dhalada ay hoos u dhacaan marka ay furan yihiin. Gla glameerka loo yaqaan 'Kinzon35 terrace glazing' wuxuu si tartiib ah ugu dhaqaaqi karaa xitaa xirmada dhalada ayaa dhex mareysa daloolka furitaanka iyo rollersaduhu ma boodaan. Albaabka isku laabista galaaska-Kinzon35 waxay u isticmaashaa bir aan kala go 'lahayn xariijimaha gaarka ah iyo kubbadaha garabka weyn leh. Marka cabirka ugu sareeya ee Kinzon35 waa 850mm * 3000mm cabbir kasta oo galaas ah.
Albaabka isku laabma muraayadaha-Kinzon35 wuxuu ka ilaaliyaa balakoonka boodhka iyo roobka iyo sidoo kale dabaysha iyo buuqa iyadoo u saamaxaysa isticmaalka sanadka oo dhan balakoonka. Glass laablaabida muraayadda-Kinzon35 wuxuu leeyahay farsamo quful fudud oo kuu sahlaya inaad isticmaasho sheyga galaaska ugu dhow dhinac ahaan sida daaqada hawo ee loo dhigi karo seddex meelood oo kala duwan. xoreynta godka dhalaalaya oo dhan.
Glass laablaabida dhalada-Kinzon35 waa natiijada soosaarka alaabada muddada fog iyo waayo-aragnimada isticmaale ee muddo dheer ah. Thanks to in ka badan hal milyan oo macaamiil ah oo qanacsan oo ka kala yimid in kabadan 40 waddan, Kinzon35e waxay noqotay mid ka mid ah albaabka isku laabashada Glass-ka ugu caansan adduunka oo dhan. Tayada aan xadidanayn iyo horumarka soosaarka ee sii socda ayaa runtii lacagtii laga baxay. Glass laablaabida dhalada-Kinzon35 waxaa lagu gartaa naqshad xarrago leh, cimri dherer iyo saaxiibtinimo-saaxiibtinimo.
Hore: Balakoonka Barafka Nidaamka Kinzon06
Xiga: Balakoonka Barafka Nidaamka Kinzon08
Albaabka Kala-baxa Kinzon35
Aluminium Albaabka Kinzon35